musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Makomo anoputika eJapan anoputika achibuda madota mamaira mudenga
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Makomo anoputika eJapan anoputika achibuda madota mamaira mudenga.
Japan inogara pamusoro pemakomo anopfuura zana, uye zviitiko zvekudengenyeka kwenyika mudunhu iri zvakakwirira. NeChina chakapfuura, hafu-mamaira ekusiyiwa nzvimbo akagadzwa akatenderedza Gomo Aso mushure mekuputika kudiki.
Gomo reAso - gomo rinoputika zvakanyanya muJapan - rakaputika kuma11: 48 mangwanani neChitatu.
Vakuru veJapan vari kuyambira vanhu kuti vasiyane nekutyisidzira kwekuyerera kwemabota uye nematombo anodonha.
Mumiririri weJMA akayambira panguva yemusangano wevaterevhizheni kuti gasi rine chepfu rinogona kunge richibuda mugomo.
Vakuru veJapan vari kuyambira vanhu kuti varambe vari kure neGomo Aso, pachitsuwa chekumaodzanyemba cheKyushu, apo gomo rinoputika zvakanyanya muJapan, rinoburitsa magasi anopisa uye madota mamaira mashoma mudenga.
Mapurisa emunharaunda akati pakanga pasina zvirevo kusvika pari zvino zvekukuvara kana kwekushaikwa kwevanhu. Vakati vafambi gumi nevatanhatu vaive mugomo kuseri kwezuva iri vakadzoka zvakanaka.
Maererano Japan Meteorological Agency, Mount Aso, nzvimbo inoshanyirwa pachitsuwa chikuru chekumaodzanyemba chenyika yeKyushu, yakaburitsa madota emvura 3.5km (2.2 mamaira) kukwirira neChitatu payakabuda panenge pa 11:43 am (02:43 GMT).
Iyo meteorological agency inoisa mwero weyambiro kune avo vari padhuze neiyo 1,592-metre (5,222ft) volcano kune vatatu pavashanu padanho renjodzi. Nekuda kwenjodzi yematombo makuru anodonha uye pyroclastic kuyerera mukati me1km (0.6 mamaira) kubva kune rakakura Nakadake crater, vanhu vakaudzwa kuti vasasvike munzvimbo iyi.
"Hupenyu hwevanhu ndicho chinhu chedu chekutanga, uye tiri kushanda nemaSelf Defense Forces, mapurisa, uye vanodzima moto kuti vabate nemamiriro ezvinhu," akadaro Secretary Chief Secretary Hirokazu Matsuno.
Guta rine vanhu vanogara padhuze Mt Aso iAso, ine huwandu hwevanhu vangangoita 26,500 vanhu.
Gomo reAso rakaputika zvishoma mu2019, nepo njodzi yekuJapan yakaipisisa mumakore angangoita makumi mapfumbamwe yakauraya vanhu makumi matanhatu nevatatu paGomo reOntake munaGunyana 90.
Japani musha kune anopfuura makomo anoputika zana, uye kudengenyeka kwenyika kunoitika mudunhu iri kwakakwirira. NeChina chakapfuura, hafu-mamaira ekusiyiwa nzvimbo akagadzwa akatenderedza Gomo Aso mushure mekuputika kudiki.
Pamwe chete nekuputika kwemakomo, kudengenyeka kwenyika kunowanikwawo mu Japani, imwe yenzvimbo dzakanyanya kudengenyeka pasi pano. Japan inokwana zvikamu makumi maviri kubva muzana zvekudengenyeka kwenyika kwepasi zvakakura 20 kana kupfuura.